Vaovao - Inona ilay masinina mameno
Ny masinina mameno dia sokajy kely amin'ny vokatra ao amin'ny milina famonosana. Avy amin'ny fomba fijerin'ny fonosana ara-materialy, dia azo zaraina ho milina famenoana ranoka, milina famenoana fofona, masinina famenoana vovo ary masinina famenoana poti. Avy amin'ny ambaratonga ny famokarana automatique dia mizara ho milina famenoana semi-automatique sy tsipika famenoana mandeha ho azy. miaraka amin'ny fanamarinana QS momba ny sakafo, ny mpamokatra menaka azo hanina dia nanomboka nandinika ny kalitaon'ny vokatra sy ny fonosana, ka ny milina famenoana menaka ao amin'ny milina famenoana toerana malaza.
Ny milina famenoana mifanaraka amin'ny fitsipika famenoana dia azo zaraina ho milina famenoana atmosfera, milina famenoana tsindry, milina famenoana rano, milina famenoana menaka, milina famenoana fametahana, masinina famenoana granule, milina famenoana vovoka, masinina famenoana rano sy siny ary famenoana banga. milina.
Matetika ny fizotran'ny masinina famenoana ranon-javatra: boaty mifono tavoahangy poakaty eo amin'ny lovia, ny fehikibo conveyor hamoahana milina fantsom-bokatra, esory tsirairay ny fantsom-bokatra, ny boaty misy ny fehikibo conveyor hamoaka milina, esory ny tavoahangy banga ao anaty boaty, alao ny fehikibo conveyor amin'ny milina fanasan-damba, ny madio, ary avy eo entina any amin'ny masinina fanangonana, ka ny zava-pisotro misy tavoahangy ao anaty iray. Ny tavoahangy poakaty nalaina avy tao amin'ilay mpanondrana entana dia nalefa tany amin'ny mpanasa tavoahangy ho an'ny famonoana otrikaretina sy fanadiovana amin'ny fehikibo hafa . Aorian'ny fizahana azy ireo amin'ny fitsapana tavoahangy sy ny fenitra fanadiovana dia ampidirina ao anaty masinina famenoana sy ilay milina fanaovana «caps». Ny zava-pisotro dia ampidirina ao anaty tavoahangy amin'ny alàlan'ny milina famenoana. ho an'ny marika. Rehefa vita ny fametahana ny marika, alefa any amin'ny masinina famonosana izy ireo satria ampidirina ao anaty boaty ary avy eo alefa any amin'ny milina fantsom-panafody noho ny fametahana sy ny fandefasana azy ireo any amin'ny trano fitehirizana.